Wax-qabadka ugu Fiican ee Multi-Function-ka ugu Fiican-Soo-saaraha Taxanaha B8 iyo Warshadda | Ameida
Nidaamka dareeraha 1.Infrared, 360 ° amniga ku xeeran si loo hubiyo badbaadada hawlwadeenka.
2.Waxaa kaamil ah nidaamka meelaynta kaamerada, taageero ama 十 calaamad iwm, wanaajinta hufnaanta shaqada.
3.Barnaamijka malabka malabka ee aluminiumka ah wuxuu leeyahay saameyn nuugid wanaagsan, isagoo hubinaya in madalku yahay mid fidsan oo aan isbeddelin ka dib isticmaalka dheeraaday.
4.Qalabka qalabaynta dabacsan, oo la jaan qaada dhammaan aaladaha taxanaha Ameida B.
5.Habka quudinta ka hortagga qalajinta iyo rogaya, quudinta dhammaystiran iyo jarista 5 ilbidhiqsi; mashiinka ka dhig mid si toos ah u goynaya goynta.
6. Awood -siinta iyo tafatirka software -ka CAD ee awoodda leh, shaqo kaamil ah oo leh CorelDraw, Adobe sawir, Onyx, Caldera, PrintFactory, software MainTop iwm; Oo taageer akhrinta barcode -ka si looga fogaado hawlwadeenku inuu diro faylka goynta khaldan, hagaajinta hufnaanta shaqada.
7. Nidaamka dejinta cabbirku wuxuu hagaajin karaa xuduudaha goynta ugu habboon iyadoo loo eegayo agabyo kala duwan si loo hubiyo saxnaanta goynta kasta.
8. Qaab dhismeedka guud ee guud, oo ay naqshadeeyeen injineerada sare ee warshadaha, fudud, deggan, fududahay in la rakibo oo la qaado.
9.Adeynta nidaamka aaladda saxda ah, oo ay fududahay in la shaqeeyo, ayaa si sax ah u xakameyn karta qotada mindida waxayna kordhin kartaa waqtiga isticmaalka sariirta.
10.Siiniga iyo nidaamka fiilooyinka fudud iyo naqshadda wareegga shassis, deggan oo ammaan ah; lagu qalabeeyay dhammaan is -dhexgalka aaladda si loo taageero casriyeynta dambe; fududahay rakibidda iyo dayactirka.
Hore: Dhaqaale Baako -gooyaha - Taxanaha B4L
Xiga: Mashiinka Mashiinka tolidda - Taxanaha A3